SomaliaReport: Al-Shabaab Waxay u Aargudaysaa Dilkii Fazul
Suxufi xagjire ah oo wax ku qora website-ka ay maamulaan dhaqdhaqaaqa al-Shabaab,laguna magacaabo Somalimemo.net ayaa sheegay inay dhici doonaan weeraro lala beegsan doono hoggaamiyeyaasha dawladda ku meel gaadhka ah, kuwaasoo loogu aargudayo dilkii Fazul Cabdullaahi Maxamed.
Fazul oo ka tirsan argagixisada Al-Qaacida, kana danbeeyey qaraxyadii waynaa ee gilgilay safaaradaha maraykanka ee Kenya iyo Tanzania sanadkii 1998 iyo gacanyarihiisa Soomaali Kenyanka ah, Muuse Xuseen ayaa la dilay sitimaankii hore ka dib markay isaga iyo ilaaladiisu ka soo kor dhaceen koontarool ay ciidamada dawladdu ku sugnaayeen. Suxufigan ayaa sheegay in ciidamadii iyo horjoogayaashii ku sugnaa barta Fazul lagu dilay la wada bartilmaansan doono la iskuna qarxin doono, mase uusan cayimin wax magic ah iyo cidda ay bartilmaameedsanayaan.
Khuburada siyaasadda ayaa sheegay in dilka Fazul uu dhaawac wayn ku yahay hawlgalada ururwaynaha Al-Qaacida iyo ururada ku lugta xidhan sida al-Shabaab. Fazul ayaa ahaa foorjariiste baasabooro ayaa dalka din badan dibadda uga bixi jiray isaga oo dhawaan ka soo noqday dalka koonfur afrika, wuxuu sidoo kale tababaro ku saabsan walxaha qarxa iyo miinooyinka siiyey da’yar ka tirsan al-Shabaab. Waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa ninka kula taliyey al-Shabaab qaraxii ka dhacay Kampala ee dilay ku dhawaad 80 qofood.
Dilkii dhawaa ee lala beegsaday wasiirka amniga iyo arimaha gudaha ka dib ayey mar kale malayshiyada al-Shabaab waxay ku gooddisay inay dili doonaan laba hoggaamiye oo kale inta an la gaadhin bisha August. Qorshahan ayaa lagu soo maleegay kulan ka dhacay magaalada Afgooye ee ka tirsan Shabeelada dhexe, wuxuuna ka danbeeyey heshiiskii dhawaan ka dhacay Kampala oo muddo sanad ah dib u dhigay doorashada, uguna baaqay ra’iisal wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu xilka iska casilo
Afhayeenka dhanka milatariga ee.al-Shabaab, Sheekh Abu Muscab ayaa cod la soo duubay laguna baahiyey saxaafadaha talaadadii ugu digay hoggaamiye-yaasha dawladda in la wada khaarajin doono.
“Mid mid ayaan dhamaantood u wada dili donaaa, sidii aan u dilnay Cumar Xaashi Aadan iyo Cabdishakuur Sheekh Xassan Faarax”
Cabdishakuur ayaa ahaa wasiirkii arimaha gudaha ee la dilay sitimaankii hore , Xaashina wuxuu ahaa wasiirkii hayey jagadan oo isna la dilay sanadkii hore.
Wariyeyaasha oo Bartilmaameedsan
Ilo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-Shabaab ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin wararka laga sii daayo idaacadda qaranka o la aasaasay laba bilood ka hor. Ilaan ayaa sheegay in suxufiyiinta ka shaqeeya idaacaddaas la eegan doono maadaama ay dawladda ku meel gaadhka ah u wada shaqeeyaan.
Idaacadda qaranka ayaa iyadu baahinaysay muuqaalo iyo barnaamiyo muujinaya hawlgalada milatari ee dawladda iyo guulihii ay dhawaan ka soo hoyeen la dagaalanka al-Shabaab. Waxay sidoo kale idaacaddu ka cadhaysiisay al-Shabaab ka dib amrkay soo bandhigeen muuqaalka maydkii Fazul. Dhanka kale, al-Shabaab ayaa aaminsan inay idaacaddu sumcad iyo buunbuunin u samaysay ra’iisal wasaare Farmaajo.